मलेसिया ईमिग्रेसनले छापा मार्दा नेपाली सहित हालसम्मकै ठूलो संख्यामा ईलिगल पक्राउ ! - jagritikhabar.com
मलेसिया ईमिग्रेसनले छापा मार्दा नेपाली सहित हालसम्मकै ठूलो संख्यामा ईलिगल पक्राउ !
मलेसिया इमिग्रेसन विभागले राजधानीको एक सपिङ मलमा छापा मार्दा १३ अवैध आप्रवासी पक्राउ परेका छन् ।
६० जना विदेशीलाई चेकजाँचका क्रममा इमिग्रेसनले जम्मा १३ जना अवैध आप्रवासी पक्राउ गरेको उनले बताए ।
पाँच-तले परिसर लट को केन्द्रीय व्यापार क्षेत्रमा अवैध आप्रवासी अधिकतर भ्यालेट पार्किङ चालक, सुरक्षा गार्ड, क्लिनर र सेल्समैन को रूप काम गरेको पाईयो ।
मलेशिया इमिग्रेशन को छापा मर्दा ” छापा मार्ने क्रममा विदेशीहरूले इमिग्रेसन हिरासतमा न परोस भनि मल को ग्राहक को रूपमा परिवर्तन गरेर छिटो भाग्न खोजेका थिए , तर असफल भए,”।
पक्राउ पर्नेमा नेपाली सहित अन्य देशका नागरिक रहेको बताइएको छ । नयाँ बर्ष संगै मलेसियाले छापालाई बढाउदै लगेको छ ।
मलेसियामा पहिलो चरणमा १० हजार कामदार पठाउने !
मलेसियाको लागी यसै महिना आफ्ना ५ हजारदेखि १० हजार नागरिकलाई मलेसियामा काम गर्न पठाउने भएको छ । मानव संसाधन मन्त्री दा’तुक सेरी एम. सरावननले भने सबै इन्डोनेसिया कामदार निर्माण ।
क्षेत्रमा उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने र घरेलु कामदारहरू समावेश छन्। ‘मलेसिया र इन्डोनेसियाबीच अन्य सबै क्षेत्रका कामदारलाई पनि भित्र्याइने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि प्रारम्भिक चरणमा ५ हजारदेखि १० हजार प्रस्ताव गरेको हो ।
उनले आज यहाँ, पासिर गुडाङमा श्रम क्वार्टर (ICLQ) एकीकृत केन्द्रीकृत उद्घाटनपछि पत्रकार सम्मेलनमा भने । सरावननले पीडीआई कर्मचारीहरूको भविष्य जोगाउन निकट भविष्यमा श्रम विभागअन्तर्गतको विशेष समिति गठन गरिने बताए। ‘यो छलफलपछि सरकारको पहल हो र हामीले इन्डोनेसियाका कामदारको सुरक्षाका लागि सहमति जनाएका छौं,।